Aakhiro ma xisi baa ma se waa macnawi? – Kaasho Maanka
Aakhiro ma xisi baa ma se waa macnawi? Ma meel jirta oo sida dhulka la taaban karaa ma se waa macne sida riyada oo kale ah aan lahayn wax la taaban karo? Diinta oo ah sida ay wadaaddadu u fakarayaan oo aan macne midaysan lahayn waxa ay sheegtay in qofkii qabri ku jira la naarayo ama uu barwaaqo ku jiro, haddii qabri la qodona waxaa loogu tegayaa lafo aan naar iyo janno midna ku jirin.
Wadaaddo badan baa sheegay in aakhiro nafta dadka la cadaabayo ama la jannaynayo, naftuna wax ay tahay la ma garanayo oo wax la taaban karo ma aha, waxa ayna noqonaysaa in waxa lagu cadaabayo ama lagu jannaynayaana ay yihiin wax la mid ah oo aan la taaban karin. Wadaaddo kale waxa ay sheegeen in ay aakhiro tahay riyo qofka u bilaabata marka uu dhinto oo uu qofku ku riyoonayo isaga oo la cadaabayo ama janno jooga, riyadaasna uu ku waarayo. Waxaa wadaaddada ugu aragti liita kuwa sheegay in dadka sidii ay ahaayeen loo soo noolaynayo oo wax la taaban karo lagu abaalmarinayo, sababta aysan aragtidaasi sax u ahayna waa in xabaalaha ay ku jiraan lafo aan waxba dareemayn oo aysan janno iyo naar midna ka jirin.
Qofka xabaasha ku jira haddii qiyaamaha la soo noolaynayo inta ka horraysa oo uusan noolayn sidee buu janno iyo cadaab u dareemayaa illey meyd waxba ma dareemee? Sida raajixa ah ama aragtida wadaaddada midda ugu roon aakhiro meel jirta oo la taaban karo ma aha ee waa riyo ama waa meel nafaha dadka la geeyo oo aan lahayn xajmi la taaban karo ee sida nafta khiyaali ah. Waxaa la sheegaa aakhiro in wax la cumo oo la cabbo, haddana aysan saxaro iyo kaadiyi dadka ka iman, taas ayaana caddaynaysa in ay dadku ku riyoonayaan iyaga oo wax cabbaya ama cunay, ama se shayga wax cabbayaa waa ruuxdii dadka oo khiyaaliga ahayd. Marna suurtaggal ma aha in dadka xabaalaha ku jira meesha ay ku jiraan lagu ciqaabayo ama ay janno tahay, waayo waa aynu og nahay.
Diinta islaamku waxa ay qabtaa in aan cudurrada la isqaadsiin oo ay shirki tahay in la aammino in uu cudur faafo, nin baana wadaad masaladaas ka hadlaya ku yiri ”Shiikh wax aan ogahay ku weydiin mayo oo aniga ayaa og in hargabka la isqaadsiiyo ee wax aanan ogeyn ii sheeg!”. Aniga ayaa og lafo xabaal ku jiraa in aysan cadaab iyo janno midna joogin, cilmigana waxaa ugu fiican midka aad og tahay.
Aakhiro Cadaabul Qabri
Nebi Maxamed ma mudan yahay ku dayasho?
Ka jawaabidda waydiintani way fududahay marka aan dib u eegno dhaxalku nebigu uga tegey dadka haysta diinta islaanka.Laakin waxa mudan in la isla fahmo waydiin kalo dhahaysa yaa mudan in lagu daydo? Nebi Maxamed wuxu la yimi xeerar u sheegay in samada looga soo dhiibey xeererkaasi waxay bahdil iyo gaboodfal ku ahaayeen welina ku yihiin maanka fayow ee aadanaha. Nebigu wuxu si toosa raali uga...
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 18th September 2019
Diimaha iyo nafta